Author Topic: Sushma Karki - model and actress (Read 118296 times)
« Reply #70 on: July 30, 2016, 03:52:30 PM »
फिल्म नपाएको झोक पत्रकार माथि किन पोखिन् सुष्माले ?
susma-karkiकाठमाडौं । नायिका सुस्मा कार्कीले संञ्चारकर्मी समीर बलामीले गरेको प्रश्नमा जंगिर्दै आफ्नो वारेमा अध्ययन गर्न भनेकी छिन् । संचारकर्मी बलामीले उनलाई चलेछ बतास सुस्तरी पछि तपाईको खासै फिल्म छैन ।
पछिल्लो समय तपाईका खासै राम्रो फिल्म आएका छैनन् । संजोगले तपाईलाई स्थापित गराउन सक्ला । कि फिल्म नै पाउन छोड्यो भन्ने प्रश्नमा उनले चलेछ बतास सुस्तरी सुपरहिट फिल्म भएको दावी गर्दै आफ्नो वारेमा पत्रकारलाई चासो नलिन भन्दै जंगिईन् । म के काम गर्छु यसको वारेमा तपाईहरुलाई के मतलब । मैले फिल्म पाएनी नपाएनी के भो भन्दै उनी जंगीएकी थिईन् । उनले आफ्नो वारेमा स्टडी गर्न समेत भनिन् । बलामीले चलेछ बतास सुस्तरी व्यवसायिक रुपमा फ्लप भयो भन्दै गर्दा उनले रिसले चूर्ण भई हिट भएको हो भन पनि भ्याईन् । उनी किन यसरी रिसाईन् त्यो उनैले जानुन् ।
तर पछिल्लो समय उनी चलचित्रमा भन्दा स्टेज कार्यक्रमहरुतिर बढि देखिएकी छिन् । उनी यतिखेर फिल्म क्षेत्रबाट गुमनाम नै भएकी छिन् । केही भिडीयोहरु तथा कहिले दुबई, कहिले हङकङ त कहिले काठमाडौं ठमेल लगायतका ठाउँहरुमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा उनी व्यस्त रहँदै आएकी छिन् । संचारकर्मी बलामीले भने उनको वारेमा अध्ययन गर्न उनको कार्यक्रम हुने स्थानहरु दुबई, हङकङ जानुपर्नेकी ठमेल भनी प्रतिप्रश्न गरेका छन् ? जे होस् फिल्म पाउन छाडेपछि उनी मानसिक तनावमा पर्दै गएको मान्न सकिन्छ । सुष्माको उक्त उत्तर पछि उपस्थित १२ पत्रकार मध्ये ११ पत्रकार कार्यक्रम बाट बाहिरिएका थिए ।
मंलवार चलचित्र संजोगको वारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस्तो संजोग मिलेको हो । १ बजे शुरु भनिएको कार्यक्रम ३ः३० मा शुरु भएको थियो । १२ जना पत्रकार सहभागी कार्यक्रममा १९ जना अतिथीहरु रहेका थिए ।
फिल्मले रिलीज मिती भन्दा २ दिन अगाडी पहिलो पत्रकार भेटघाट गरेको हो । यति मात्र नभई नायिका सुष्मा कार्की र नृत्य निर्देशक गोविन्द राईले चलचित्र संजोगका निर्माता उमेश उप्रेतीले फिल्म बनाउन होटलनै बेचेको भन्दै बेईज्जत गरेका थिए । जुन कुरा फिल्मको वारेमा बोल्दा निर्माता स्वयम उमेश उप्रेतीले भनेनन् । यो चलचित्र यहि शुक्रवार अर्थात श्रावण १४ गतेवाट प्रदर्शनमा आएको छ । ( july 29, 2016)
« Reply #71 on: March 16, 2017, 08:10:14 AM »
Back again/ super hot *
C13lw-XVEAAHieF.jpg (138.15 kB, 792x1200 - viewed 146 times.)
« Reply #72 on: November 23, 2017, 09:17:10 AM »
sushma-rana-hot-1.jpg (177.56 kB, 810x678 - viewed 109 times.)
sushma-rana-hot-2.jpg (187.23 kB, 810x662 - viewed 126 times.)
« Reply #73 on: March 14, 2018, 10:59:50 PM »
« Reply #74 on: March 15, 2018, 01:06:30 AM »
Is it an affair or what ?
Quote from: samir211 on March 14, 2018, 10:59:50 PM
« Reply #75 on: April 09, 2018, 09:39:02 AM »
« Reply #76 on: April 09, 2018, 07:36:29 PM »
यस्ले चाँहि चुप लागेर
लुगा खोलेको मात्रै राम्रो देखिन्छ
« Reply #77 on: April 12, 2018, 10:32:47 AM »
Quote from: tundikhel on October 16, 2015, 01:57:23 PM
yesko ra namrata ko bf dekhera laagchha nepali kt harulai ramro keta bhaneko thaa chhaina ki kaale keta haruko thulo hunchha bhanne sochne ho natra anuhaar ta bhaisi ko kando jastai chha dubaijana ko ani kt haru bhane chahi pwaat..
« Reply #78 on: July 10, 2018, 08:05:01 AM »
received_2428497850510084.jpeg (53.45 kB, 958x960 - viewed 32 times.)
received_2428498007176735.jpeg (33.76 kB, 1080x1920 - viewed 24 times.)